IOSစနစ်အတွက် Metatrader 4
iosစနစ်အတွက် ပြုလုပ်ထားသော MetaTrader4ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
အိုင်ဖုန်းMetaTraderကို အသုံးပြုပြီး သင့်ကွန်ပျူတာတွင် အကောင့်ဝင်ရောက်သော အချက်အလက်များ ပတ်စ၀က်များကိုပင် သင့်အိုင်ဖုန်းတွင် ထည့်သွင်းကာ အကောင့်ဝင်ရောက်ရောင်းဝယ်နိုင်ပါသည်။
အိုင်ဖုန်းအတွက် သီးသန့်ရေးဆွဲထားသော ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါသည်
အိုင်ဖုန်းမှာ MT4နှင့် ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ
အဆင့် ၁: သင့်အိုင်ဖုန်းတွင် App Store ကိုဖွင့်ပါ။ သို့မဟုတ် ဆော့ဝဲလ်ကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။searchတွင် MetaTrader 4ဟု စာရိုက်ပြီးရှာကာ MetaTrader 4ကိုတွေ့လျှင် ထိုဆော့ဝဲလ်ကို ရွေးလိုက်ပါ။ MetaTrader4ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဒ်ရယူလိုက်ပါ။.
အဆင့် ၃: အကောင့်အချက်အလက်များနှင့် ပက်စ၀ဒ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ အိုင်ဖုန်းတွင် စတင်ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။